Ọdịiche dị n'etiti ebu rọba na ihe nkedo anwụ anwụ
Ọdịiche dị n'etiti ebu rọba na ihe nkedo anwụ anwụ
Plastic ebubụ abbreviation maka a jikọtara ebu maka mkpakọ ịkpụzi, extrusion ịkpụzi, injection ịkpụzi, igbu ịkpụzi na obere ụfụfụ ịkpụzi.Die-nkedo anwụ bụ usoro nkedo mmiri anwụ anwụ akpụ akpụ, usoro emechara na igwe ihe nkedo anwụ anwụ raara onwe ya nye.Yabụ kedu ihe dị iche n'etiti ebu rọba na ihe nkedo anwụ?
1. N'ozuzu, ihe nkedo na-anwụ anwụ na-adịtụ ire, na elu elu na-abụkarị blued.
2. Oghere n'ozuzu nke ihe nkedo na-anwụ anwụ kwesịrị ịbụ nitrided iji gbochie alloy ịrapara na oghere.
3. Nrụgide injection nke ihe nkedo na-anwụ anwụ buru ibu, ya mere a chọrọ ka template ahụ dị ntakịrị iji gbochie nrụrụ.
4. Ọnụ ụzọ ámá nke ihe nkedo na-anwụ anwụ dị iche na nke injection injection, nke na-achọ nrụgide dị elu nke cone gbawara agbawa iji mebie mmiri ahụ.
5. Ntuzi ahụ na-ekwekọghị ekwekọ, ịgba ọsọ nkedo nke ihe nkedo anwụ na-adị ngwa ngwa, nrụgide injection bụ otu ọkwa.A na-agbanyekarị ihe mkpuchi plastik n'ọtụtụ ọkwa iji nọgide na-enwe nrụgide;
6. N'ozuzu, na plastic ebu nwere ike ike gwụrụ site thimble, nkewa n'elu, wdg The anwụ-nkedo ebu ga-enwe iyuzucha uzo na slag na-anakọta akpa.
7. N'elu nkewa nke ihe nkedo na-anwụ anwụ nwere ihe dị elu chọrọ, n'ihi na mmiri mmiri nke alloy dị mma karịa nke plastik, ọ dịkwa ize ndụ maka okpomọkụ dị elu na ihe nrụgide dị elu na-agbapụ na nkewa ahụ. elu.
8. Isi ihe na-anwụ anwụ nke ihe nkedo anwụ adịghị mkpa ka emenyụ ya, n'ihi na okpomọkụ dị n'ime oghere anwụ na-agafe ogo 700 n'oge nkedo anwụ, ya mere ịkpụzi ọ bụla dị ka quenching otu ugboro, oghere nwụrụ anwụ ga-esiwanye ike ma sie ike karị. , ebe a ga-emenyụ ihe mkpuchi plastik izugbe n'elu HRC52.
9. N'iji ya tụnyere nkedo plastik, nkwụsị nke kwekọrọ na akụkụ nke mbughari nke ihe nkedo anwụ (dị ka ihe mmịfe isi na-adọta) buru ibu, n'ihi na okpomọkụ dị elu nke usoro nkedo anwụ ga-eme ka mgbasawanye ọkụ, ma ọ bụrụ na mkpochapụ ahụ dị ntakịrị, ebu ga-arapara.
10. Ahịhịa anwụ anwụ bụ akwa efere abụọ na-emeghe otu oge.Ụdị plastik dị iche iche nwere usoro ngwaahịa dị iche iche.Ebu efere atọ na-adịkarị.Ọnụ ọgụgụ na usoro nke oghere oghere na-ejikọta ya na nhazi ihe.
Anyị ụlọ ọrụ e specialized na ebu emebe, ebu ụlọ, plastic injection ịkpụzi n'ihi na ihe karịrị 20 years.And anyị bụ a ISO certificated manufacturer.We nwere ahụmahụ otu na-enye kasị mma ọrụ n'oge ọ bụla.
Oge nzipu: Mee-04-2022